Ukun cufan leh maraqa béchamel | Recipe
Ukun cufan leh maraqa béchamel
Ascen Jimenez | 26/11/2021 14:56 | Bilow, Cunnooyinka la dubay, Cunnooyinka muuska
Cunto aad ku raaxaysato qoys ahaan. Halkan ka ukun adag oo la kariyey waa jilayaasha, waxaanu ka buuxinaynaa tuna, mussel iyo saytuun madow.
Marka la buuxiyo waxaan ku dabooli doonaa a bechamel aad u fudud. Dhowr xabbadood oo ka mid ah mozzarella dusha sare iyo ... dubay!
Isku day haddii aad rabto inaad ka baxdo hawl maalmeedka. Hubaal inaad ku celiso.
Waxaan u diyaarineynaa ukunta adag ee la kariyey si gaar ah.
90 g mackerel qasacadaysan, miiray
30 g oo saytuun madow ah
1 qasac yar oo mussel ah oo la jarjaray, oo dareeraha leh
Waxaan ku ridnay ukunta si aan ugu karino digsi biyo iyo milix yar. Isla marka ay biyuhu bilaabaan inay karkaraan, waxay ku qasbanaan doonaan inay wax karsadaan ilaa 10 daqiiqo. Xaaladdan oo kale waxaan rabnaa in jaallo ah si fiican loo kariyo.
Waxaan diyaarinaa bechamel. Waxaan ku diyaarin karnaa Thermomix, adoo gelinaya dhammaan maaddooyinka galaaska iyo barnaamijka 7 daqiiqo, 90º, xawaaraha 4. Waxa kale oo la samayn karaa hab dhaqanka, ku jira digsi weyn. Waxaad raaci kartaa cuntada aan ka sameeyay isku xirka, laakiin qadarka aan ku tilmaamay qaybta maaddooyinka (1 litir oo caano ah ...).
Waxaan ku ridnaa walxaha buuxinta baaquli.
Marka ukunta la dhammeeyo waanu diiray oo kala badh u jarnaa.
Waxaan ka saareynaa jaallo la kariyey oo ku dar maaddooyinka buuxinta. Buuxinta oo dhan si fudud ugu burburi fargeeto.
Waxaan ka buuxineynaa ukunta cajiinka aan hadda diyaarinnay.
Waxaan ku dhejineynaa bechamel yar il ama kookaha (waxa muhiimka ah waa in lagu ridi karo foornada).
Waxaan dhignaa ukunta isha, dusheeda béchamel.
Waxaan ku shubnaa bechamel ukunta.
Waxaan jarjareynaa mozzarella oo ku dhejineynaa dusha sare.
Waxaan ku adeegnaa dhir yar oo la jarjaray saxan kasta.
Macluumaad dheeraad ah - Maraqa Bechamel
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Bilow » Ukun cufan leh maraqa béchamel
Rooti badan oo fudud